Akwụkwọ Izabelle Hundrev na Martech Zone
Edemede site na Izabelle Hundrev
Izabelle Hundrev bụ onye edemede edemede nke Chicago na Ntụziaka. Onye hụrụ ndụ ọgụgụ na agụm akwụkwọ n'anya oge niile, ọ gụsịrị akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ na Mahadum Missouri na 2017. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Izabelle bidoro ọrụ na ahịa B2B ebe ọ bụ ọkachamara na mmepe azụmahịa. Mgbe afọ 1.5 gachara n'ahịa, ọ laghachiri na mgbọrọgwụ nta akụkọ ya wee mee mgbanwe ọrụ na ahịa ọdịnaya.
The Ultimate Tech Stack for High-Performance Ndị na-ere ahịa
Fraịde, Septemba 11, 2020 Fraịde, Septemba 11, 2020 Izabelle Hundrev
Na 2011, onye ọchụnta ego Marc Andreessen dere na ama, sọftụwia na-eri ụwa. N'ọtụtụ ụzọ, Andreessen kwuru eziokwu. Chee echiche banyere ọtụtụ ngwanrọ ngwanrọ ị na-eji kwa ụbọchị. Otu ama nwere ike ịnwe ọtụtụ narị ngwanrọ ngwanrọ na ya. Ma nke ahụ bụ naanị otu obere ngwaọrụ na akpa gị. Ugbu a, ka anyị tinye otu echiche ahụ na azụmaahịa ụwa. Otu ụlọ ọrụ nwere ike iji ọtụtụ narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku, nke ngwanrọ ngwanrọ. Site na ego rue mmadu